AU200AUD ooVimba-Funda ukuRhweba
I-Australia 200 (AU200AUD) idibanisa ngaphezulu kweNqanaba 6800, ngoMeyi ungaQhubeka phezulu
Ukuhlaziywa: 11 Februwari 2021
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili7000, 7100, 7200
Imimandla yenkxaso ephambili6100, 6000, 5900
I-Australia 200 (AU200AUD) Iindlela ezihlala ixesha elide: I-Bullish
AU200AUD Intengiso ingaphantsi kwenqanaba lama-6800. Isalathiso sidityaniswe ngaphezulu kwenqanaba lama-6800 ukusukela ngeJanuwari 20. i-Australia i-200 ithengise kancinci. Intengiso ibonakaliswe zizibane ezincinci zomzimba. Abathengi kunye nabathengisi bafikelele kwixesha lokungazithembi.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-58 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
I-Australia 200 (AU200AUD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bearish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iAustralia 200 yonyukela phezulu. NgoFebruwari 3 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye phezulu kwe-6947.40.
I-AU200AUD ingaphezulu kwenqanaba lama-40% ye-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwi-bullish umfutho. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu.
I-Australia i-200 ikwi-uptrend kodwa ithengisa kancinci. Isalathiso sinokufikelela ezantsi njengoko sijongana nokwaliwa kwinqanaba lama-6880. Okwangoku, isalathiso sihamba ecaleni.
I-Australia 200 (AU200AUD) Ukophuka ngaphezulu kwenqanaba 6800, Uptrend ngokunokwenzeka
AU200AUD kuthengiswa ngaphezulu kwenqanaba lama-6800. Namhlanje, ixabiso liphukile ngaphezulu kwenqanaba lama-6800. Njengoko amaxabiso eqhekeka ngaphezulu kwee-SMAs, i-Australia 200 kungenzeka inyuke.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-57 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iAustralia 200 yenza ezantsi. NgoFebruwari 3 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha wavavanya amanqanaba angama-78.6% eFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci okanye phezulu kwe-6947.40.
I-Australia i-200 ikwi-uptrend kodwa ijongene nokwaliwa kwinqanaba le-6800. Namhlanje, iinkunzi zizama ukophula inqanaba lama-6800.
I-Australia 200 (AU200AUD) ibambe ngaphezulu kwenqanaba lama-6600, iphinde ibuye kwi-Uptrend
AU200AUD kukuhamba ecaleni kweenyawo kwinqanaba elingaphantsi kwenqanaba lama-6800. Namhlanje, isalathiso siphindaphindekile ngaphezulu kwenqanaba lama-6600 kwaye saphinda saqala ukuya phezulu. Izolo, ixabiso lavavanya ukunganyangeki kwi-6800 kodwa lagxothwa. Ukuhamba okuya ezantsi kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphule ngezantsi kwee-SMAs kwaye uxinzelelo lokuthengisa luzinzile.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso siye sehla saya kwinqanaba lama-51 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kubonisa ukuba imarike ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ikwabonisa ukuba kukho intsalela phakathi konikezelo kunye nemfuno.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iAustralia 200 yenza ezantsi. Nge-27 kaJanuwari ezantsi; ikhandlela elibuyise umzimba livavanye i-50% yenqanaba lokubuyiselwa kweFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-2.0 Fibonacci extensions okanye ezantsi ezingama-6350.80.
I-Australia i-200 ikwi-uptrend kodwa ijongene nokwaliwa kwinqanaba le-6800. Ukuhamba okuya ezantsi kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso awile kwaye aphule inqanaba lama-6600 asezantsi.
I-Australia 200 (AU200AUD) Inengxaki yokuPhula ngaphezulu kweNqanaba 6800, i-Uptrend ngokunokwenzeka
I-AU200AUD kukuhamba ecaleni Ngaphantsi kwenqanaba lama-6800. Isalathiso siphuliwe ngaphezulu kwenqanaba lama-6800. Ngomhla kaJanuwari 20, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba i-AU200AUD iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.0 Fibonacci eyandisiweyo okanye kwinqanaba eliphezulu le-6952.40.
I-AU200AUD -Itshathi yansuku zonke
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-64 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
I-Australia 200 (AU200AUD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iAustralia 200 yonyukela phezulu. NgoJanuwari 21 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-88.6%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-1.1129 yolwandiso lweFibonacci okanye phezulu kwe-6855.20.
I-AU200AUD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwingingqi ethengwe ngaphezulu kweemarike. Ixabiso lingawela kwingingqi ethengiweyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihle ziye phezulu.
I-Australia i-200 ikwi-uptrend. Isalathiso sikwingingqi ethengiweyo, ngokwesalathiso se-stochastic. Imakethi kuthiwa ikwisantya esomeleleyo sokukhuthaza.
I-Australia i-200 (AU200AUD) yokudibanisa ngokudibeneyo kwiNqanaba 6800, iDowntrend Isenokwenzeka
I-Australia 200 (AU200AUD) Iindlela ezihlala ixesha elide: Ukulinganisa
I-AU200AUD isecaleni elihamba ngaphantsi kwenqanaba lama-6800. Ixabiso liqhubekile nokudibanisa ngaphantsi kokuchasana kwinqanaba lama-6800. Imakethi iya kuphinda iqale inyathelo elingaphezulu ukuba ukumelana kwinqanaba le-6800 kwaphuliwe. Isalathiso siza kuphinda siqhubeke phantsi xa sijamelene nokwaliwa kwinkcaso yentloko.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-54 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Australia engama-200 isezantsi. Ngokwaliwa kwenqanaba lama-6760, intengiso yehle yaya kwinqanaba lama-6640 yaphinda yaqala phezulu. Ixabiso lilungiswe phezulu kodwa lajongana nokunye ukwaliwa kwinqanaba lama-6720. Imakethi inokuthi iqhubeke nokuhla kwayo.
I-AU200AUD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwingingqi ethengwe ngaphezulu kweemarike. Abathengisi banokuvela batyhale amaxabiso ezantsi. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zihamba ecaleni.
I-Australia i-200 ihambela ezantsi. Iimarike zihlala kwingingqi ethengwe kakhulu ukusukela ngoNovemba. Ukudodobala kuya kuqhubeka kwakhona ukuba amaxabiso aphula ngezantsi kwee-SMAs.
I-Australia 200 (AU200AUD) ifikelele kwi-Bullish Exhaustion, ngoMeyi ingabuyela umva kwinqanaba le-6795.90
I-AU200AUD ikwicala elihamba kwicala elingaphantsi kwenqanaba lama-6800. Isalathiso besitshintsha phakathi kwamanqanaba angama-6600 kunye nama-6800 ukusukela ngoNovemba 24. I-Australia 200 kungenzeka ukuba iwe njengoko ifikelela kummandla weentengiso ogqithisileyo. Kuyathandabuzeka ukuba isalathiso sinendawo eyaneleyo yokuhlangana njengoko i-RSI ikwinqanaba lama-63.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-63 leNdawo yamandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba imarike ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50. Ukunyuka okuphezulu kunomda
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Australia engama-200 inyukela phezulu. Ngomhla kaJanuwari 6 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanyiweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Isalathiso siya kuphakama kwaye sibuye umva kwinqanaba 1.272 ulwandiso lweFibonacci. Eli linqanaba eliphezulu le-6795.90.
I-AU200AUD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sikwingingqi ethengwe ngaphezulu kweemarike. Kusenokwenzeka ukuba iwe. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa uptrend wangoku.
I-Australia i-200 ihambela ezantsi. Isalathiso besithengisa ngaphantsi kwenqanaba lokumelana ne-6800. Ukuhla kwehla kulindeleke njengoko imarike ifikelela kwingingqi ethengiweyo.
I-Australia 200 (AU200AUD) ikulungiso olusezantsi, ukwehla kwinqanaba le-6529.80 kusenokwenzeka
I-Australia i-200 isecaleni elihamba ngaphantsi kwenqanaba lama-6300. Isalathiso besisoloko sitshintsha phakathi kwamanqanaba angama-6600 kunye nama-6800. I-Australia 200 kungenzeka ukuba iwe njengoko ifikelela kummandla weentengiso ogqithisileyo.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso siwele kwinqanaba lama-54 leSalathiso seNdawo yaMandla aNxulumene naMandla isixa se-14. Oku kubonisa ukuba imakethi ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Australia engama-200 inyukela phezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokuchasana kwinqanaba lama-6700. Isalathiso sibuyisa kwindawo ephezulu. Umzimba wekhandlela obuyiselweyo uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-50% yeFibonacci. Isalathiso siza kuwa kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci. Eli linqanaba eliphantsi le-6529.80.
I-AU200AUD -4 Itshathi yeYure
I-AU200AUD ingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sisondela kummandla ogqithileyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa uptrend wangoku.
I-Australia i-200 ihambela ezantsi. Isalathiso siwela emva kokwaliwa kwinqanaba lama-6680. Ngokwesixhobo seFibonacci, imakethi iya kuwa kwinqanaba le-6529.80.
Uqikelelo lonyaka lwe-Australia 200 (2021): I-AU200AUD iya kukhanya njenge-COVID-19 Subsides
Ukuhlaziywa: 27 Disemba 2020
Iindawo eziKhuselekileyo: 7200, 7300, 7400
Ngo-2020, i-Australia 200 yafikelela kwixabiso layo kodwa yaphazamiseka. Emva koko, isalathiso sisebenzise iinyanga ezisele ukulungisa ngaphezulu. NgoJanuwari, imarike yafikelela kuma-7200 aphezulu kwaye kwabakho ukonakala ngesiquphe ngoFebruwari nangoMatshi. Ukophuka kufikelele kwinqanaba eliphantsi le-4420.60 kwaye kubuyiswa umva. Ukusukela ngo-Epreli, ixabiso belilungisa ngaphezulu. NgoDisemba ixabiso liye lenyuka laya kwinqanaba lama-6662.70.
I-Australia 200 (AU200AUD) Uqikelelo lwamaxabiso: Itshathi yenyanga
Ukulandela ukophuka kwikota yokuqala, iinkunzi zeenkomo zathenga idiphu zokuphinda ziqale ngokutsha. NgoJuni isiphatho sesibane kunye nomsonto omde ubonise uxinzelelo lokuthengisa olomeleleyo kwinqanaba lexabiso eliphezulu. Ukunyuka okuphezulu kwabanjwa kangangeenyanga ezintathu ngaphambi kokuba isalathiso siwe ngoSeptemba. Ngo-Okthobha, indawo yokumelana ne-6000 yaphulwa njengoko isalathiso safikelela kwinqanaba eliphezulu lama-6662.70 ngoDisemba.
I-Australia 200 (AU200AUD) Uqikelelo lwamaxabiso: Itshathi yeveki
Kwikota yokuqala ye-2020, isalathiso safikelela kummandla othengiweyo wentengiso. Kwingingqi ethengwe ngaphezulu, abathengisi bavele ukutyhala amaxabiso ezantsi. Isalathiso siwele kwinqanaba le-4420.60 kwaye sabuya umva. Kwinqanaba le-4420.60, intengiso yafikelela kummandla ogqithileyo. Abathengi bakwazile ukutyhalela amaxabiso phezulu.
Ngokubanzi, imarike yemasheya yase-Australia izabalazile ukufumana umhlaba ngexesha le-COVID-19, ubhubhane. Kwi-2021, kunokwenzeka ukuba kubekho utshintsho kwixabiso lesitokhwe kwaye abatyali mali baya kutsalwa. Kungenxa yokuba uqoqosho lwehlabathi oluchaphazelwe kukugonya lusemlonyeni wokujongana nengxaki ye-COVID-19. Kwamanye amasheya aseAustralia amiselwe ukuba akhanye.
I-Australia 200 (AU200AUD) iqhubekile nokuGcina ngaphezulu kweNqanaba 6700
I-Australia 200 (AU200AUD) yexesha elide iTrend: Bullish
I-Australia 200 yonyukela phezulu. Umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Isalathiso sele sinyukile saya kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci kodwa okwangoku ukubuyela umva,.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-67 leNdawo yokuDityaniswa kwamaNqanaba aMandla aMandla aHlanganisiweyo ixesha eli-14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo-ntla nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Ai-ustralia 200 (AU200AUD) yeXesha eliPhakathi leTrend: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Australia engama-200 inyukela phezulu. Ukunyuka okuphezulu kuye kwaqhekeka ukuxhathisa kwinqanaba lama-6700. Isalathiso sibuyisa kwindawo ephezulu.
I-AU200AUD-4 iyure yeKjhart
4Itshathi yeeMpawu Ukufunda
I-AU200AUD ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sisondela kummandla ogqithileyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambekele phezulu zibonakalisa uptrend wangoku.
I-Australia 200 yonyukela phezulu. Isalathiso sikhangela emva kokwaliwa kwinqanaba lama-6800. Imakethi inokwenzeka ukuba inyuke emva kwerejista.
Phawula:LUkurhweba ayingomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali
I-Australia 200 (AU200AUD) ibuyela kwiNqanaba lama-6625, inyusa phezulu ngokuLungileyo
Ukuhlaziywa: 10 Disemba 2020
I-Australia 200 yonyukela phezulu. Isalathiso safikelela kwinqanaba eliphezulu le-0.6700 kwaye sachaswa. I-AU299AUD ngoku ibuyela umva ukusuka phezulu kutshanje. Uhlaziyo kunokwenzeka ukuba luqhubeke emva kokubuyiselwa kwenye indawo.
I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend. Isalathiso siwele kwinqanaba lama-61 leSalathiso seNdawo yaMandla aNxulumene naMandla isixa se-14. Oku kubonisa ukuba imakethi ikwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho ophakathi 50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Australia engama-200 inyukela phezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokuchasana kwinqanaba lama-6700. Isalathiso sibuyela umva kwinqanaba eliphezulu lakutshanje. Nge-9 kaDisemba phezulu; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyisa le-Fibonacci engama-61.8% Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kuwa kwaye sifike kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Oko kwinqanaba elisezantsi 6622.20.
I-AU200AUD -3 Itshathi yeYure
I-AU200AUD ingaphantsi kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso sisondela kummandla ogqithileyo. I-SMA yeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend wangoku.
I-Australia 200 yonyukela phezulu. Isalathiso sikhangela emva kokwaliwa kwinqanaba lama-0.6700. Imakethi inokwenzeka ukuba inyuke emva kwerejista.